Samachar Batika || News from Nepal » यी पुरुष हरेक हप्ता बाबु बन्छन्, हालसम्म ८०० जनाका बाबु बनिसके…..
यी पुरुष हरेक हप्ता बाबु बन्छन्, हालसम्म ८०० जनाका बाबु बनिसके…..
सुन्दापनि अनौठो लाग्न सक्छ । तपाईलाई पत्यार नलागेको हुनसक्छ । के हरेक हप्ता कोही बाबु बन्न सम्भव छ ? अझ ८०० जनाको बाबु बन्न ? तपाइँलाई अचम्म लाग्यो होइन ? आमपुरुषको हैसियत तथा कल्पना भन्दा बाहिरको यो सामर्थ्य बेलायतका एकजना पुरुषले यथार्थमा परिणत गरिदिएका छन् ।
सिमोन वाट्सन नामका ती बेलायती पुरुष अहिलेसम्म ८ सय बच्चाको बाउ बनिसकेका छन् र उनी बाउ बन्ने क्रम जारी छ । उनका सन्तानहरु हरेक हप्ताजसो विश्वका विभिन्न देशमा जन्मिरहेका हुन्छन् । वास्तवमा वाट्सन शु’क्रकिट दाता हुन् ।
धेरै निसन्तान महिलाहरुले शु’क्रकिट खरिद गर्नका लागि सिधै वाट्सनसँग स’म्पर्क राख्छन्, सोसल मिडियामार्फत नले सोसल मिडियामा आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।
अहिले पनि उनको शु’क्रकिटबाट विभिन्न देशका महिलाहरुले ग’र्भाधारण गरिरहेका छन् र हरेक हप्ता स्पेनदेखि ताइवानसम्म उनका बच्चा जन्मिरहेका छन् । आउँदो १/२ वर्षमै उनले एक हजार बच्चाका बाउ बनेर अजम्बरी कीर्तिमान राख्नेछन् ।
वास्तवमा कुनै आधिकारिक क्लिनिकबाट शु’क्रकिट खरिद गर्दा निकै महंगो पर्ने हुनाले सोसल मिडियामार्फत सस्तोमा शु’क्रकिट खरिद गर्नेहरुको संख्या ठूलो छ । त्यसैले धेरै निसन्तान महिलाहरुले शु’क्रकिट खरिद गर्नका लागि सिधै वाट्सनसँग स’म्पर्क राख्छन्, सोसल मिडियामार्फत् । वाट्सन नियमित रुपमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन् र आफ्नो स्वास्थ्य पक्का गर्दै मात्र शु’क्रकिट दान गर्दछन् ।
शु’क्रकिट बेच्ने काम गै’रकानूनी तथा अ’नैतिक भएको भन्दै बेलायतमा उनको वि’रोध
उनले नियमित रुपमा आफ्नो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनलाइनमा पोष्ट गर्दै आएका छन् । यसरी व्यक्तिगत रुपमा अनलाइनमार्फत शु’क्रकिट बेच्ने काम गै’रकानूनी तथा अ’नैतिक भएको भन्दै बेलायतमा उनको वि’रोध पनि हुने गरेको छ । तर उनलाई यसको पर’वाह छैन र आफुले बकाइदा वैधानिक हिसाबले शु’क्रकिटको निजी व्यापार गरिरहेको बताउँछन् । एजेन्सी
प्रकाशित मिति ४ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०९:५४